सी जिनपिङको स्वागत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै गर्ने | NepalDut
सी जिनपिङको स्वागत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै गर्ने
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार काठमाडौं ओर्लिंदा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै विमानस्थलमा स्वागत गर्ने । साथै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि स्वागतमा जानेछन् ।
नेपालले पछिल्लो समयमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आउँदा कसैलाई सवारी मन्त्री तोकेर उनैले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने गर्दै आएको थियो । तर, यसपाली सीलाई विशेष महत्व दिन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीले नै चीनका राष्ट्रपतिलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्ने बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा जानकारी दिए ।
चीनका राष्ट्रपतिको तहबाट यसपालि २३ वर्षपछि भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि सन् १९९६मा नेपाल आएका चीनका राष्ट्रपति ज्याङ जेमिनलाई पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थलमा नै गएर स्वागत गरेका थिए ।
यद्यपि पहिला र अहिलेको चीनमा आकाश जमिनको फरक भइरहेको छ । त्यति नबोल्ने आफ्नै काम मात्रै गरिरहने भनेर बुझिने चीन अहिले आक्रामक विदेश नीति लिएर अघि बढिरहेको छ
चीनका अहिलेका राष्ट्रपति सीलाई तत्कालीन नेता माओत्से तुङपछि सबै भन्दा शक्तिशाली मानिने गरिएको छ । सी विचारधारालाई अहिले चीनले आफ्नो मुलुकको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाइरहेको छ ।
चीनका राष्ट्रपति आउँदा नेपाल रेल सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर हुन सक्ने जनाइएको छ । यसैगरी चीनले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धीमा पनि हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । यद्यपि सरकारको तर्फबाट औपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको छैन ।
सुपुर्दगी सन्धीका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको बारेमा आफूले पनि सुनेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. अर्यालले जानकारी गराए ।
तर, त्यसमा के कस्ता बुँदाहरु पारिएका छन् भन्ने विषय भने खुलिसकेको छैन । चीनले आफ्नै विशेष प्रशासित क्षेत्र हङकङमा सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयककै कारण लामो समयदेखि आन्दोलन झेल्नुपरेकाले त्यसमा राखिने विषयवस्तुका बारेमा सतर्क रहनुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रले जोड दिँदै आएको छ ।
सीको सुरक्षाका लागि चार घेराको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा अगाडि सेना र त्यसपछि क्रमैसँग सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचरको टोली रहने बुझिएको छ ।